Ungashintsha kanjani ukulungiswa kwesikrini usebenzisa i-xrandr | Kusuka kuLinux
Ungashintsha kanjani ukulungiswa kwesikrini usebenzisa i-xrandr
Shintsha ifayela le- isinqumo kuma-distros asuselwa ku- I-GNOME o KDE kakhulu elula. Okwalabo abasebenzisa I-Openbox kanye nokuphuma kokunye, lolu daba luyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Isikhathi esiningi, lokhu kuholela encazelweni ende yokuthi ungalishintsha kanjani ifayili lokumisa le- X iseva: xorg.conf, etholakala njll / X11.
Noma kungekho lutho olungahambi kahle ngale ndlela, i-xorg.conf yehlisiwe futhi ingethusa abasebenzisi abaningi.
Sebenzisa xrandr kungaphezulu rápido y elula. Ngaphezu kwalokho, inezindawo eziningi zokuqhafaza futhi ingasetshenziselwa nezinye izidingo kuthakazelisa kakhulu, njengokucushwa kwama-monitors amabili, njll.
1 Ungayisebenzisa kanjani i-xrandr
2 Ukulungisa i-dpi
3 Abaqaphi ababili
4 Lungiselela i-xrandr ukuqala ekuqaleni
5 Amathuluzi wemifanekiso
Ungayisebenzisa kanjani i-xrandr
Okokuqala, bhala izinqumo ezahlukahlukene ezikhona zokuqapha kwakho:
Uma kwenzeka isixazululo osifunayo singafakwanga ohlwini, kungenzeka ukuthi ukuqapha kwakho akusekeli ngempela noma udinga ukufaka umshayeli ongcono (i-ati, intel, noma i-nvidia).
Ngemuva kwalokho, setha isixazululo ofuna ukusisebenzisa (shintsha "1400 × 1050" kwisinqumo osifunayo):
I-xrandr -s 1400x1050
I-dpi yehlukile ekulungisweni kwesikrini sakho (okubhekiselwe njengamaphikseli x intshi) futhi kuthinta imihlobiso yamawindi, usayizi ofanayo, ukunikezwa kwamafonti, njll.
Kuma-monitors amaningi, i-xrandr izosetha i-dpi ngokuzenzakalela. Uma kungenjalo, noma uma ukhetha ukushintsha lokhu kumiswa, ungakucacisa ngesandla:
I-xrandr -dpi 96 -s 1400x1050
Uma lokho kwehluleka, ungacacisa i-dpi ku ~ / .Xdefaults
Ngivule umhleli ngabeka okulandelayo kulelo fayela:
Le dpi izosetshenziswa kuwo wonke amawindi amasha owavulayo. Ungaphuma futhi ukuze ubone imiphumela yalolu shintsho (asikho isidingo sokuqalisa kabusha isistimu).
Uma i-96 kungeyona i-dpi ekufanele, ungazama i-72 noma i-135.
Kungenzeka futhi ukusebenzisa i-xrandr ukulungisa ama-monitors amabili. Ukuze wenze lokhu, kufanele usebenzise izinketho-zesokudla-nesesobunxele.
Nasi isibonelo, usebenzisa ikhadi le-nvidia:
Okokuqala, bhala uhlu lwabaqaphi usebenzisa i-xrandr.
Umphumela uzoba yinto efana nale elandelayo:
Isikrini 0: ubuncane be-320 x 200, i-1920 x 1200 yamanje, ubuningi be-4096 x 4096
I-DVI-I-1 ixhunywe ngo-1920x1200 + 0 + 0 (izannormal left inverted right x axis y axis) 520mm x 320mm
I-DVI-I-2 ixhunywe ngo-1920x1200 + 0 + 0 (okwejwayelekile kwesobunxele kuguqulwe kwesokudla x eksisi y eksisi) 520mm x 320mm
I-TV-1 inqanyuliwe (i-eksisi evamile engakwesobunxele evaliwe kwesokunxele)
Ngemuva kwalokho sebenzisa i-xrandr ukulungisa ama-monitors. Shintsha amagama "DVI-I-1" ne "DVI-I-2" abe amagama wabaqaphi bakho. Ungadinga futhi ukulungisa isinqumo bese ushintsha okuthi “–left-of” ukuze kuthi “–ight-of”.
I-xrandr -uto - okukhipha i-DVI-I-2 - imodi 1920x1200 - ngakwesokunxele kwe-DVI-I-1
Inomphumela ofanayo nalowo:
I-xrandr -uto - okukhipha i-DVI-I-1 --mode 1920x1200 - kwesokudla-se-DVI-I-2
Ukusetha i-monitor eyinhloko, sebenzisa inketho eyinhloko:
I-xrandr -uto - okukhipha i-DVI-I-1 --mode 1920x1200 - eyinhloko - ye-DVI-I-2
Lungiselela i-xrandr ukuqala ekuqaleni
Le ndlela iyahluka ngokuya ngemvelo yedeskithophu oyisebenzisayo (gnome, kde, xfce).
Ebhokisini elivulekile, engeza umyalo we-xrandr ku ~ / .config / openbox / autostart.sh.
Ku-fluxbox, yenza umsebenzi ofanayo kepha kufayela ~ / .fluxbox / startup
Ngokuya ngemvelo yedeskithophu oyisebenzisayo, ungangeza i-xrandr ku ~ / .xinit
Kunezindawo ezinhle kakhulu zokuqhafaza ku-xrandr. Phakathi kokudume kakhulu, singabala i-lxrandr, grandr, krandr ne-arandr.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ungashintsha kanjani ukulungiswa kwesikrini usebenzisa i-xrandr
Okuthunyelwe okuhle, esikhathini esithile esedlule ngibhale i-athikili yokuthi ungazilungiselela kanjani izikrini ezimbili ngaphansi kwebhokisi lokuvula futhi ngiphinde ndikhiqize amaphephadonga angahleliwe kusikrini ngasinye: isixhumanisi
Ake sibheke ukuthi ngiyaqonda yini ... cabanga ukuthi anginaso isixazululo engisifunayo kusiqaphi, nganoma iyiphi yalezi zinhlaka zokuqhafaza ngizokwazi ukudala leso sinqumo futhi ngikusebenze ekuqaleni?
Futhi, ngilibeka kuphi lelo fayela (esimweni sokuthi nge-graphical interface akunakwenzeka) ngokwesibonelo ku-Gnome ne-KDE?.
Ngiyabonga kakhulu, kade ngangifuna isisombululo senkinga yokulungiswa, kepha wonke umuntu wayibeka ngefayela le-Xorg, i-conf, kepha lelo fayela ezinhlotsheni ezintsha ze-distros alisasetshenziswa.
Uma isixazululo osifunayo singaveli kusixhumi esibonakalayo esilethwa yi-GNOME noma i-KDE ukuguqula ukulungiswa kwesikrini, ungazama le ndlela, yebo. Kunoma ikuphi, kungenzeka kakhulu ukuthi uma ukulungiswa kwesikrini osifunayo kungaveli, kungenxa yokuthi ASISEKELWA ukuqapha kwakho. Impela, kukhona okuhlukile kulo mthetho kepha imvamisa akuvamile kakhulu. Hug! UPaul.
Cha, kimi i-monitor yami inesinqumo esiphezulu nesendabuko esingu-1366 × 768, ku-Windows isebenza kahle kahle nomshayeli we-Intel, umqaphi ungama-emachines (mhlawumbe kungenxa yomkhiqizo). Ngokuphambene, kuwo wonke ama-distros I-GNU / Linux isixazululo esiphezulu bekuyi-800 × 600 noma i-1024 × 600, kuya nge-distro, kepha ukusuka lapho ayikhuphukanga.Ngizamile ngawo wonke ama-distros, kepha kukodwa lapho isixazululo esifanele savela ngaphandle kokusebenzisa i-xrandr futhi i-cvt iyalela ukuqapha kwami, ku-Ubuntu 10.10, kepha angikwazanga ukusebenzisa imiphumela ebonakalayo, angazi ukuthi kungani, angivuseleli ngisho noku ...
Ngakho-ke ngizohlola lokho okufake lapha, futhi ngizokutshela ukuthi kuyasebenza yini ...
I-PS: kuyamangaza, ngoba kumqaphi we-HP womfowethu, onesinqumo sendabuko esingu-1600 × 900 angibanga nankinga ngesinqumo, nginombono wokuthi kungenzeka ukuthi ngoba ukuqapha kwami ​​akusekelwa noma kungaziwa yi Uhlelo lwe-kernel hardware.
Kungisebenzele ukwehluleka kokumiswa kokuxazululwa okwenzekile kuLinuxMint kimi 12. Ngesizathu esithile lapho ngiqala isistimu akusiboni isisombululo sesiqaphi sami. Kepha ngikuxazulule ngokufaka i-'grandr ', ngakha isithonjana kwideskithophu okufanele ngisebenzise konke ukuqala kweDeskithophu. Ngiphinde ngasebenzisa i-'lxrandr 'kepha ngazivumelanisa kangcono ne-'grandr'. Kunconywe impela 'umzukulu'. Sanibonani
UMax jonathan kusho
Ngisebenzisa iskripthi ku-netbook yami esisebenzisa i-xrandr, singivumela ukuthi ngisebenzise izinqumo ezingasekelwa noma okungenani ezingabhalwanga ngokuzenzakalela, ngoba ubukhulu bungu-1024 × 600 futhi ngombhalo ngingawusetha ube ngu-1280 × 750
Ayisebenzi i-gnome kuphela, ngiyisebenzisa ku-XFCE
Angikhumbuli umthombo lapho ngiwuthole khona, kepha ngiwuthole ku-google; D
Phendula uMax Jonathan
Ngisebenzisa i-Xrandr ukuzungezisa isikhundla sedeskithophu ku-netbook kuphela lapho ngiyidinga ngempela, ngoba ihamba kancane kabuhlungu. Lapho ngiqeda ukuyisebenzisa kufanele ngiyibulale bese ngiqala kabusha i-X.
Ngabe kukhona ongangitshela ukuthi kungani?
Sawubona mngani nginenkinga elandelayo ku-centos version 4
Ulwazi lwami lwe-linux alunalutho futhi lapho ngizama ukufaka imvelo yokuqhafaza ngithola umyalezo wokufaka ongasekelwa.
Ngizamile ukushintsha ukucushwa ngisebenzisa leyo ndlela oyichaza lapha bese ngithola i-Can't open display (null)
Ngicela ungitshele ukuthi ngingenza kanjani ukubuyisela ukumiswa kokuqapha ngoba ukusebenzisa inketho yokusetha akusebenzi nakho
Ngiyabonga ngosizo onganginika lona
Kungakuhle uma ufaka imiyalo oyifakayo kanye nemiyalezo ephelele yephutha.
I-Neutron Poncho kusho
Lo myalo usetshenziswa uma usuvele ungaphakathi kohlelo lokuqhafaza (i-X server) .Kwakho, uhlelo lokuqhafaza aluqali, okokuqala kufanele wenze uhlelo lokuqhafaza oluyi-Xorg start.
Phendula i-Poncho Neutron
Ngiyazi ukuthi sekuyisikhathi eside selokhu kuthunyelwe kepha othile ubengangitshela ukuthi ngingalifaka kanjani ushintsho ku-xubuntu kungasiza kakhulu ngiyabonga
Ngiyabonga ngeposi ongisize ngalo kakhulu manje isikrini sami sibukeka sisihle!
Sawubona, okokufundisa kwakho kube wusizo olukhulu, ngisekude nje ukuqeda futhi ngithanda ukuthi ungichazele kangcono ukuthi ngingaqala kanjani iseshini, ngifake i-xubuntu. Jabulela
Ngibonga kakhulu ngingenaphutha!
Izinhlanganisela ezi-9 ezihlekisa kakhulu futhi ezingasizi ngalutho